ရင်ထဲအထိ ထိစေသော ဓာတ်ပုံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရင်ထဲအထိ ထိစေသော ဓာတ်ပုံ
ရင်ထဲအထိ ထိစေသော ဓာတ်ပုံ
Posted by phone_kyaw on Feb 25, 2012 in Copy/Paste | 17 comments
ဘာရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြက်ဥတစ်လုံးစာ လစာတိုးဖို့ အတွက် ဆန္ဒပြနေတဲ့ လှိုင်သာယာက အလုပ်သမတစ်ဦးလေးပါ။ သူမအိမ်မှာ ဘာတွေများပြသနာဖြစ်နေလဲမသိဘူး။ သနားစရာ အရမ်းကောင်းလို့ ပါ။ ဒီဘ၀ကနေ အမြန်ဆုံးလွှတ်မြောက်ပါစေလို့ ပဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ညီမငယ်။
ကြက်ဥတလုံး.. ယူအက်စ်မှာ.. ၁၀ဆင့်လောက်ရှိတယ်.။
ကမ္ဘာတန်းလည်း.. ၁၀-၂၀ဆင့်.. မြန်မာငွေဆို.. ၁၀၀ကျပ်လောက်ပဲရှိရမှာပေါ့..။
(ဒီကြက်ဥတလုံးသတင်းမှန်ရင်… )အလုပ်သမား အယောက်၂၀၀၀ ကို.. နေ့တွက်… ဒေါ်လာဝက်တိုးတာနဲ့မျြောက်တော့.. တနေ့အလုပ်ရှင်ကုန်မဲ့.. ငွေထွက်လာမှာပါ..
ငွေရှင်အနေနဲ့.. သိပ်တော့မချောင်… :?
ဒီအလုပ်သမားတွေကိုင်တွယ်ပုံကို.. မြန်မာပြည်ထဲရင်းနှီးမြုတ်နှံမဲ့သူတွေ.. သေသေချာချာစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာ.. သတိထားသင့်တယ်..။
ဟိုလုပ်ဒီလုပ်နဲ့.. နောင်ဝင်လာမဲ့… ဒေါ်လာသန်းဂဏန်းလွင့်ထွက်သွားဦးမယ်..။
တခါတလေ.. အီမိုးရှင်းထက်.. အချက်အလက်ကို..ဦးစားပေး ကြည့်ရတာမျိုးရှိပါတယ်..။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ.. အလုပ်သမားနဲ့..လယ်သမားထုကို.. အခြေခံတဲ့..ပါတီစံနစ်ကိုတည်ဆောက်ယူရမယ်လို့ ထင်မိတယ်..။
ပြည်ခိုင်ဖြီုးပါတီက.. ငွေရှင်တွေဖက်က..ရပ်မယ်လို့ထင်တာမို့.. ချိန်ခွင်လျှာညှိတာမျီုးပေါ့…
သူကြီးေ၇ .. မြန်မာပြည် ကြက်ဥ တစ်လုံး ဒေါ်လာ ၀က်တော့ မရှိသေးဘူးခင်ဗျ. ၁၃၀ ကျပ် .. ၀.၁၅ ဆင့်လောက်ဘဲရှိပါသေးတယ် ။
ဒီစက်ရုံက ဆန္ဒပြတာ လေးခါလောက်ရှိပြီလို့လည်း အိတုန် ပြောချက် အရ သိရပါတယ် ။။
လောဘ တက်လာရင် မတက်ခင်မှာ ဘေး နိုင်ငံတွေက ရင်းနှီးမြုပ်နှံမူတွေ ဘာလို့ ပြန်ပြေးချင်တာလည်း ဆိုတာလည်း သတိနဲ့တော့ ကြည့်သင့်ပါတယ် ။။ တစ်ရုတ်ပြည် လစာတွေ တိုးလာလို့ မြန်မာပြည် ရွှေ့ချင်သူများ ဒီမှာလည်း လစာတွေ တက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ သူကြီးပြောသလို လွင့်စရာတွေ ဖြစ်လာမယ်ထင်ပါတယ် ။
သူသာ အမြဲရနေတဲ့ သူရ ကြီး လစာတွေ အတင်းတိုးခိုင်းနေတာဟာ ၀န်ထမ်း အကြိုက်လိုက် လုပ်ပြီး အစိုးရ အဖွဲ့ ကို ဒုက္ခပေးချင်လို့ဆိုတဲ့ ပုံစံပေါက်နေသလိုဘဲ .. အများစုကတော့ လစာတိုးတာနဲနဲ ကုန်ဈေးနုန်းတွေ တက်သွားမှာကိုကြောက်နေကြပါတယ် ..
Ma Khaing Khaing Moe (UE2)
Wages for January – 2012 c.No – 2719
အခြေခံလစာ 192.0 -နာရီ 16320
အချိန်ပိုကြေး 93.5 -နာရီ 17298
အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက် အချိန်ပိုကြေး —
မှတ်ချက်။ ။(ထိုလတွင် တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ပိတ်ရက် ၅ ရက်ပိတ်သဖြင့် OT ရော ပုံမှန်အလုပ်ချိန်ေ၇ာ အခြားလများထက် နည်းနေပါသည်။)
တိုင်ရီ ဖိနပ်စက်ရုံမှ ပညာအရည်အချင်း ၈ တန်း။ လုပ်သက် ၅ နှစ် ပြသ၁နာဖြစ်သော လ ဇန်နဝါရီ လစာ ပုံစံဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်မျှမရှိပါ။ စက်ရုံတစ်ရုံနှင့်တစ်ရုံ လစာပေးပုံစံချင်းမတူရု် ဗဟုသုတ ရရန် တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုလတွင် တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ၅ ရက်ပိတ်ပါသည်။ ထိုပိတ်ရက်အတွက် လစာတွင် ထည့်မတွက်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်ဆန္ဒစပြကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အချိန်ပိုလုပ်ခ OT တွက်နည်းမှာ အစိုးရချမှတ်ပေးထားသော ဖော်မြူလာရှိပါသည်။ ယင်းမှာ–
တစ်နာရီ အချိန်ပိုလုပ်ခ=( တစ်နာရီပုံမှန်အလုပ်ခ × ၈ × ၁၂ )/၄၄ ဖြစ်ပါသည်။
=၁၈၅ ကျပ် ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် တစ်နာရီပုံမှန် အလုပ်ခ ၈၅ ကျပ်သမားသည် အိုဗာတိုင်တစ်နာရီလုပ်ခ ၁၈၅ ကျပ်ရပါသည်။ တစ်နေ့အလုပ်ချိန် ၈ နာရီနှင့် စနေနေ့အလုပ်ချိန် ၄ နာရီသတ်မှတ်ပြီး တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များကို အလုပ်ပိတ်ရက်အဖြစ်သတ်မှတ်ပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့နှင့် အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက်များ အလုပ်ဆင်းရပါက OT လုပ်ခဖြင့်ရှင်းရပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့ အလုပ်ပိတ်ပါက အလုပ်ရှင်က လုပ်ခမပေးရ သော်လည်း နေ့ကြီးရက်ကြီး အစိုးရရုံးပိတ်ရက် အလုပ်ပိတ်ပါက ပုံမှန်လုပ်ခ × ၈ နာရီဖြင့်ထည့်တွက်ပေး ရသည်။
စက်မှုဇုံမှ အလုပ်သမားများကို လစာအများကြီးရစေချင်ပါသည်။ ဒါကစေတနာတကယ်ပါ။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံမဟုတ်လို့လဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် အစိုးရဝန်ထမ်းများကို အခြေခံလစာ တစ်သိန်းဝန်းကျင်ပေးရန် လွှတ်တော်တွင်တင်ပြထားသော်လည်း ဘဏ္ဍာေ၇းဝန်ကြီးက မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း ငြင်းထားသည့်အချိန်တွင် စက်ရုံဝန်ထမ်းများ တစ်လတစ်သိန်းဝန်းကျင်၇နေသည်ကို နည်းလို့ဆန္ဒပြခြင်းအား အစိုးရက ဘယ်လိုအာဏာသုံးရု်မျှ ဝင်မစွက်ဖက်နိုင်ခဲ့ပါ။ ကိုယ့်ဝမ်းနာ ကိုယ်သာသိပါသည်။
အလုပ်သမားဘက်မှ တောင်းသော လုပ်ခမှာ တစ်နာရီ ၁၅၀ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။ ၁၀၀ ကျပ်အထိ အလုပ်ရှင်က လိုက်လျောခဲ့ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ လစာမှာ တစ်နာရီ ၈၅ ကျပ်စားဖြစ်သည်။ လက်မှတ်ထိုးခါနီးမှ အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရသည်။ တစ်နာရီ ၁၅၀ကျပ်နှုံးဖြင့် လစာတွက်ကြည့်ကြစို့။
အခြေခံလစာ 208.0 -နာရီ 31200 (ပုံမှန် 26 ရက်×8နာရီ)
အချိန်ပိုကြေး 120 -နာရီ 39272 (ပုံမှန် ပျှမ်းမျှ OT)
ထို့ကြောင့် အလုပ်သမားများတောင်းဆိုသည်မှာ တစ်လ တစ်သိန်း အနည်းဆုံးပေးရန် တောင်းဆိုခြင်းသက်ရောက်ပါသည်။ စက်မှုဇုံတွင် အလုပ်လုပ်ရန် အသက်ပြည့်ပြီး ကျမ္မာ၇န်သာ လိုသည်။ မည်သည့် ပညာရေးမျှကန့်သက်မထားပါ။ ကျွန်တော်တို့စက်ရုံတွင် ၆ တန်းနှင့် သုံးသိန်းကျော်ရသောသူ လည်းရှိကြောင်း တစ်ခါက ကျွန်တော်ပြောဖူးပါသည်။
ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာ အလုပ်သမားများ ဆန္ဒပြပြီးလစာတိုးတောင်းသည့်အကျင့် စွဲသွားမှာတကယ်စိုးပါသည်။ အလုပ်အခွင့်အလမ်းများပေါများလာပါက ဆန္ဒပြရန်မလိုပါ။ တစ်၇ုံမကောင်းတစ်ရုံပြောင်းရုံသာ။ ခုတော့ စက်ရုံကသာ မလိုက်လျောပဲ စက်ရုံပိတ်မည် လျှော်ကြေးပေးမည် ဟုဆိုပါက မည်သို့လုပ်ကြမည်နည်း။ ဝန်ထမ်းနှစ်ထောင်ကျော်ကို အလုပ်တစ်ပြိုင်နက်၇ဖို့ခက်လှပါသည်။
မည်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီ မှ ထိုဝန်ထမ်းနှစ်ထောင်ကို အလုပ်ချက်ချင်းမရှာပေးနိုင်ပါ။
အားလုံး စဉ်းစားနိုင်ရန်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း အလုပ်သမားပါ။
(အမှန်တရားကိုချစ်သော ကျွန်တော်သည် အမှန်တ၇ားတစ်ခုအတွက် လူမုန်းခံ၇သည်ဆိုငြားအံ့ ဟုတ်ကဲ့ လူမုန်းခံရန်အဆင်သင့်ပါခင်ဗျား။)
ဆက်ပြောဆက်ပြော။ မြန်မာလူမျိုးတွေက စဉ်းစဉ်းစားစားလုပ်တတ်ကြတဲ့သူရှားတယ်။
တွက်ရေးကတော့စက်သူဌေးပဲ တွက်ကြည့်မှစက်မရှိမှန်းသိကြတာများတယ် ကျွန်တော်တို့အပါ
အ၀င်ပဲ ။ ရွှေပြည်နန်းကြော်ငြာလိုမှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့
ချုပ်ပိတ်တပ် ဖြစ်ရပါပဂေါ ခွိခွိ
AKKO တော့ မှားပီထင်တယ်…………….ကိုအိတုံတဲ့………… အဟိအဟိအဟိ
သူတို့ အခုတောင်းတဲ့ တနာရီ ၁၅၀ ဆိုတာအခြေခံလစာကိုပြောတာ။ တနာရီ ၁၅၀ ကျပ်ရခဲ့ရင် တလ ၁သိန်း ၁သောင်း ရမှာဖြစ်တယ်။ တလ တသိန်းဆိုရင် တယောက်စာ စားလောက်ရုံဘဲရှိမှာပါ။ ဒါတောင်နေထိုင်မကောင်းရင် ကိုယ့်အိတ် ထဲက စိုက်ကုရဦးမှာ။ အခု အခြေခံ လစာက တနာရီ ၇၅ ကျပ်ဆိုတော့ တလကို ၅သောင်းခွဲ ၆ သောင်းလောက်ဘဲ ရမှာဖြစ်တယ်။ အဲဒီလစာက တလကို အဲဒီလူလောက်ငှအောင် သုံးနိုင်ဘို့အဲဒီလူ အမြဲတမ်းနေကောင်းရမယ်။ မိသားစု ၀င်ကို လုံးဝထောက်ပံ့ဘို့ မလိုတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ အလုပ်လည်း တရက်မှရက်မပျက်ရဘူး။ ၁ရက်အလုပ်ပျက်တာနဲ့တရက် ခအပြင် ရက်မှန်ကြေး ၆၀၀၀ ကျပ်ကို နှုတ်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အခြေခံလစာတင်တာက ပိုအကျိုးရှိတယ်။ ရက်မှန်ကြေးဆိုတာ အားထားလို့ မရဘူး။
Hello, Mr. Phone Kyaw, almost often you’re rough in everything, not smooth. But now your post is very clear to describe your kindness. Whatever it’s better that sometimes make it rough and then make it smooth in all.
Actually, this event is not even Tai Ye Factory only, you can find so many at everywhere in Myanmar. However almost employees don’t dare to tell about ” Human Right “, it’s until now. So now in Myanmar, we must watch ” What is Democracy”. We all believe in Democratic.
အလုပ်သမားတွေအရေးကိစ္စကို တကယ်တမ်း အလေးပေးကာကွယ်ပေးမဲ့
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဋ္ဌာနလက်အောက်ခံအဖွဲ့ အစည်းတွေကလည်း တကယ်တန်းထိထိရောက်ရောက်
ဒါပေမယ့်လို့ ဒီတိုင်ရီအလုပ်သမားများသာ လစာဒီ့ထက်ပိုပြီးရမယ် တန်တန်ရာရာလစာ
ဒါမျိုးလေးတွေတင်ပါ.. ကပုန်းကျော်ရဲ. သများတို.လဲပြောရဒါမောဒယ်.. ဒါဗြဲ…
ကြည်.ရတာ… ဒီနေ. ဘုရားရှစ်ခိုးတယ်နဲတူတယ်…………………………..
ကိုဖုန်းကျော်တင်တဲ့ ပုံ ထဲမှ မုဒ် က ၊ကိုဖုန်းကျော်ပေးတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကလေးနဲ့ဆိုတော့ တော်တော်ခံစားရပါ
မအီတုံးဖေါ်ပြသော အလုပ်ရှင်၊အလုပ်သ္မားအကြား၊မြန်မာနိုင်ငံ၏၊လက်ရှိအခြေအနေတွေလည်းစဉ်းစားရမှာပါပဲ၊ နိုင်ငံတစ် ကာနှုန်းတောင်းဘို့အခြေအနေရောက်ဘို့အတွက်၊၀န်ထမ်းကျွမ်းကျင်မှု၊ဈေးကွက်ရရှိမှု၊အရေးကြီး သ လို၊ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာလားပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ၊ထုတ်လုပ်သူတွေ လန်မပြေးအောင်လည်းခုချိန်အရေး ကြီးပါသေး တယ်၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ပြုင်ပြောင်းလဲရေးအဆင့်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ သည်တော့ ကျနော်ပြော ချင်တာ က ၊ အဲလိုဆိုလို့ မြန်မာအလုပ်သ္မားတွေ အနစ်နာခံ၊ ပေးသလောက်ယူရမယ်မဆိုလိုပါဘူးဗျာ၊အခြေခံ
အဆင့် တစ်သိန်း ဆိုတာ မြန်မာ့အခြေအနေဆို သိပ်အဆိုးကြီးမဟုတ်သေးပါဘူး၊ တစ်ယောက်ရှာစာ တစ်အိမ်လုံးဝိုင်းစားဘို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ အဲကျနော်တို့အချိန်တော့စောင့်ရ မှာပါပဲ၊ နိုင်ငံတစ် ကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ များများဝင်လာ၊စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံတွေများမျာပေါလာ။နိုင်ငံတစ်ကာဈေးကွက် မှာမြန် မာပြည် ထွက်တွေ ကိုယုံကြည်မှုရလာ တဲ့ အချိန်။ ကိုယ့်မြန်မာတွေလည်းကျွမ်းကျင် မှုခိုင်မာတဲ့အချိန်၊ အဲတော့ လာထားလေ နိုင်ငံတစ်ကာ နဲ့ ညှိပြီးလာစာတောင်းတော့ပေါ့။မကြိုက်အခြားပြောင်းယုံပေါ့။
တစ်ကယ်တော့ ပြောရင် အဓိကတရားခံ အုပ်ချုပ်သူတွေအသုံးမကျတာတွေကြောင့်၊ ခုထိပြည်သူဟာ
အနစ်နာခံနေရတဲ့ဘ၀မလွတ်သေးတာပါပဲ။ (အဲ မြန်မာပြည်မှာတော့ တရုတ်နှစ်ကူးဟာ တရားဝင်ပိတ် ရက် ထဲမပါ ဘူးလို့တော့ထင်ပါသည်။ အဲ တရုတ်ကြီးသတိထားမိပြီး၊ တရားဝင်တောင်းနေအုန်းမယ်။)
မြန်မာအလုပ်သမားတွေလစာများများတိုးဘို့၊ကျုပ်တို့ ပြည်မှထွက်ကုန်တွေ၊နိုင်ငံတွင်းသာမက၊ နိုင်ငံတစ်ကာအဆင့်ထိ များများရောင်းကြရပါစေဗျား။
ပေါ်လစီပြောင်းမှ၊ နိုင်ငံရေးဖွံ့ဖြီုး၊ နိုင်ငံရေးဖွံ့ဖြိုးမှ၊ စီးပွါးရေးဖွံ့ဖြိုးပါမည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် လုပ်ခလစာနည်းပါးမှုသက်သက်အပေါ် အခြေခံလျင် တိုင်ရီစက်ရုံကဲ့သို့ ခေါင်းပုံဖြတ် အမြတ်ထုတ်ခံရသည့် အစဉ်အလာ တည်မြဲနေလိမ့်မည်။ အဆင့်အတန်းမှီ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအား ဆွဲဆောင်ရန် နည်းဥပဒေ ပတ်ဝန်းကျင်များ ပြုပြင်ရေးတာဝန် အစိုးရအပေါ် ရှိပါသည်။ လူကောင်းလာလျင် လူဆိုးမနေနိုင်ပါ…။
ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်လည်း လုပ်ကြပါ ဆရာတို့။
ရှဉ့်လည်း လျှောက်သာ၊ ပျားလည်း စွဲသာ ပေ့ါ။
ကိုယ့် Field မဟုတ်တော့ ဘယ်သူမှားတယ်၊ ဘယ်သူမှန်တယ်ဆိုတာကို မချင့်ချိန်နိုင်ပေမယ့် …
တင်းလွန်းလျှင် ပြတ်၊ လျော့လွန်းလျှင် ပတ် ဆိုတဲ့ စကားပုံလည်း ရှိတာမို့…….
ကိုဘုန်းကျော် လိုဘဲ အရီးလဲ ဆုတောင်းပါတယ်။
ဒီဘ၀ကနေ အမြန်ဆုံးလွှတ်မြောက်ပါစေလို့ ။
မြန်မာပြည်သူလူထု အားလုံး အတွက်လဲ ပါပါတယ်။
Kywat Chee says:
ကျွန်တော် သိထားတဲ့ ဆန္ဒပြနည်းလေး တစ်ခုပါ။
လိုက်လျောချက်ကို သဘောတူလက်ခံလို့ အလုပ်ဆင်းတာ မဟုတ်ဘဲ ဆက်လက်ဆန္ဒပြဆဲ ဖြစ်တယ် ဆိုတာမျိုး အလုပ်ထဲမှာ လက်ပတ်တို့ နဖူးစည်းတို့ ပတ်ပြီး အလုပ်ဆင်းတာမျိုးပေါ့။
အလုပ်ရှင်က လစာ တိုးမပေးမချင်း လက်ပတ်၊ နဖူးစည်း မချွတ်ဘဲ ဆက်လက် ဆန္ဒပြရင်း အလုပ်ဆင်း တာမျိုးပေါ့။ အလုပ်ဆင်းတော့ လစာလည်းရတာပေါ့။ အလုပ်ရှင်က နဖူးစည်း၊ လက်ပတ် တွေ စည်းပြီး ဆန္ဒပြရင်း အလုပ်မလုပ်ဖို့လည်း မတားနိုင်ဘူးပေါ့။ နောက်ပြီး သတ်မှတ် အချိန်ပိုလစာ မရရင် အချိန်ပို မဆင်းဘဲ နေလို့ရနိုင်တာဘဲလေ။
အလုပ်ရှင်ရော အလုပ်သမားပါ အကျိုးမထိခိုက်နိုင်တဲ့ နည်းကောင်းလေးလို့ ထင်မိပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံက သစ်စက်အလုပ်သမားတွေ ဆန္ဒပြကြတဲ့နည်းလေးပါ။ နောက်ဆုံးတော့ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား၊ ကြားအဖွဲ့တစ်ခု (အစိုးရဖြစ်စေ၊ အခြားအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်စေ) ညှိနှိုင်းပေးပြီး လစာတိုးရ သွားကြ ပါတယ်။
ဒီနေ့ ၈-၃-၂၀၁၂ မြန်မာတိုင်းမ် မှာ ၀ါဏိဇ္ဇခုံရုံးက “အလုပ်သမားတွေရဲ့ တစ်နာရီလုပ်ခကျပ် ၁၂၀ ဖြစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပြီး အခြေခံလစာကလည်း ကျပ် ၅၁၀၀၀ ဖြစ်ဖို့ပါရှိထားပါတယ် ” ဟု တိုင်ရီ ဖိနပ်စက်ရုံအလုပ်သမားများ၏ တောင်းဆိုမှုများနှင့် ပတ်သက်ရ်ျ ဥပဒေရေးရာများ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေသူ ရှေ့နေ ဦးအောင်သူရိန်ထွန်း က ယခုလ ၁ ရက်နေ့ က ပြောကြားသည် ။
ကြားဖူးခဲ့သမျှထဲမှာ တရားမျှတမှု့ အရှိဆုံး နဲ့ သမာသမတ်အကျဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက် အကောင်းဆုံးခုံရုံးကို တွေ့ခဲ့ရတာပါ ဟု ၄င်းကပြောကြားသည် ။
ယခင်လစာမှာ အခြေခံလစာ တစ်လလျှင် ကျပ် ၄၀၀၀၀ အချိန်ပိုကြေးမှာ တစ်နာရီလျှင် ကျပ် ၇၀ ဖြစ် ကြောင်း ။ အလုပ်သမားများတောင်းဆိုမှုမှာ အခြေခံလစာကို ကျပ် ၆၀၀၀၀ မှ ၈၀၀၀၀ အထိ တိုးမြှင့်ပေးရန် နှင့် အချိန်ပိုကြေးကို တစ်နာရီလျှင် ကျပ် ၁၅၀ သတ်မှတ်ပေးရန် တို့ အပြင် အခြားသော ဒဏ်ကြေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တို့ကို လျှော့ပေါ့ပေးရန် တောင်းဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။